အံ့ဩပြီး ကြောက်စရာ သိပ်ကောင်း တဲ့ တွေ့ရှိမှုအသစ် အရ ကိုရို နာ ဗိုင်းရပ်စ် သည် HIV ပိုးဖြစ်တည် မှု နှင့် ဆင်တူလာဟုဆို – EverBestMM
အံ့ဩပြီး ကြောက်စရာ သိပ်ကောင်း တဲ့ တွေ့ရှိမှုအသစ် အရ ကိုရို နာ ဗိုင်းရပ်စ် သည် HIV ပိုးဖြစ်တည် မှု နှင့် ဆင်တူလာဟုဆို
ကို ရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ H.I.V. ဗိုင်းရပ်စ် ”
” ဒီက ပ်ရောဂါ ဟာ နိုင်ငံအတော် များများ မှာ အထွတ်အထိပ် ကိုရောက်နေပြီ” WHO အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ရိုင်ယန်ကပြောတယ်။
ဒီနေ့ ( ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ) အထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ခံရသူ စုစုပေါင်း အမေရိကန်မှာ ၂.၅ သန်း၊ ဘရာဇီးမှာ ၁.၂ သန်း၊ ရုရှားမှာ ၆ သိန်းကျော်နဲ့ အိန္ဒိယမှာ ၅ သိန်းကျော်..။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ လည်း အခြေအနေမကောင်းလှ..။သောကြာနေ့က လူနာအသစ် ၅၁ ယောက်။ မနေ့က ( ဇွန်လ ၂၇ ) တစ်နေ့တည်း ၆၂ ယောက်။
နောက်ဆုံး အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်ခံရ သူတွေက စုဒိုဂွန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (수도권 교회 ) နဲ့ ဝန်ဆောင်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်း (왕성교회) ကဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား မှာတော့ အခုလောလောဆယ် ကျောင်းတွေပဲ ပြန်ပိတ်ရတော့မလိုလိုနဲ့ တစ်ယောက်မကျန် မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး ဂရုစိုက်နေကြရတယ်။
တောင်ကိုရီးယားထက် အဆပေါင်း များစွာ ဆိုးတာက အမေရိကန်..။ အမေရိကန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နှုန်းက ကြောက်စရာကောင်း လောက်အောင် မြန်ပြီး များနေတယ်။ မနေ့က တစ်နေ့တည်း ၅ သောင်းနီးပါး ..။ အမေရိကန်မှာ ဒီတစ်လ အတွင်း ဆန္ဒပြသူတွေ ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အဖျက်သမားတွေကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု သတင်းတွေ က သိပ်မကောင်း လှပါ ။
အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ် ၊ရပ်ကွက် တစ်ခုလုံး ကို ဖျက်ဆီး၊ အကြမ်းဖက် ၊ရိုက်နှက်၊ လမ်းပေါ် က လမ်းသွား လမ်းလာတွေ ကိုတောင် သတ်ဖြတ်ဖို့အထိ စိတ်တိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ သူတွေတောင်ရှိနေကြ..။သူတို့ကို အမှီပြုပြီး ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး စိတ်တိုင်းကျ ဟိုဟိုဒီဒီ ခုန်ကူးနေကြပြီ..။
အဓိက လူငယ်တွေက တားလို့မရ၊ အသက် အရွယ်ကြီး သူတွေ သူတို့ကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အသက်ပေးရင်ဆိုင်နေရ။မင်းသားက quarantine ကာလကို ချိုးဖောက်ပြီး အိမ်ထဲမှာမနေတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံမင်းသား Joachim တောင် စပိန်နိုင်ငံ ယူရို ၁၀,၄၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၁၈၀၀) ဒဏ်ရိုက် ခံခဲ့ရသေး။
မင်းသားက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလမှာ COVID-19 ရောဂါ ရခဲ့တယ်။ဒီလို ရောဂါရတာတောင် ဇွန်လမှာ ကာဒိုဘိုမြို့က စပိန် ရည်းစား ရဲ့ မွေးနေ့ပါတီပွဲကို သွားခဲ့တာတဲ့ ။လူငယ်တွေ စိတ်ကို ဦးစားပေး၊ ဆန္ဒပြ၊ ဒါမှ မဟုတ် အပျော်အပါးကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရတာများတယ်။ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ရုတ်တရက် Covid-19 ကူးစက်ခံရသူတွေ များလာတာ အသက် ၄၀ အောက် လူလတ်ပိုင်း နဲ့ လူငယ်တွေ..။
အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁၀ သန်းကျော်သွားခဲ့။ဟိုး အစပထမတုန်း က ပညာရှင်တွေနားလည်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကတော့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပဲ ထိခိုက်နိုင်တယ်တဲ့။နောက်ပိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ အဆုတ်တင်မကဘဲ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံးနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပါ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ သိခဲ့ကြရ..။ဒါကြောင့် အနံ့၊ အရသာတွေပါ ပျောက်ကုန်တဲ့ အထိ။
သုတေသီတွေ နောက်ထပ် တစ်ခု ထပ်တွေ့ပြန်ပြီ ။ အဲဒါဟာ အံ့ဩပြီး ကြောက်စရာ သိပ်ကောင်းတယ် ။ COVID-19 နဲ့ ဆေးရုံတက်နေရ တဲ့ လူနာတွေဆီမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဆဲလ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ် ဆိုတာ ကိုပဲ ။ကိုယ်ခံ စွမ်းအား စနစ် ကို ကျဆင်းစေတဲ့ H.I.V. ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ဆင်တူနေတယ် တဲ့။
HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်စဉ် အတိုင်းပါပဲ ။ ကလေးငယ်တွေ ကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က သိပ်ပြီးဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးငယ်တွေမှာ သိုင်းဂလင်း ( thymus )တွေက အရမ်းကောင်းတော့ T ဆဲလ် အသစ်တွေ ကို အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်လို့။ အဲဒီ T ဆဲလ်အသစ်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုမြန်မြန် ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျတော့ သိုင်းဂလင်း ( thymus ) တွေက ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်တော့ ။ ဒါကြောင့် အသေအပျောက်များတာဖြစ် တယ်တဲ့။
( ref: Dr. John Wherry -immunologist at the University of Pennsylvania )
ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ နိုင်ငံတွေ အကြားပြိုင်ဆိုင်မှု ကလည်း ပြင်းထန်လှ..။ Corona19 ကာကွယ်ဆေးတွေလည်း နောက်ဆုံး အဆင့်တွေရောက်နေကြတာ ၁၀ နိုင်ငံရှိပြီ။
အဲဒီအထဲက ဗြိတိသျှဆေးဝါးကုမ္ပဏီ AstraZeneca ကထုတ်လုပ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးက အဆင့်မြင့်တယ် လို့ WHO ကခန့်မှန်းတယ်။ Imperial ကောလိပ် (U.K) က သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ Corona19 ကာကွယ်ဆေးအသစ် ပေါ့..။ အဲဒီအဖွဲ့က အများနဲ့မတူတဲ့နည်းလမ်း အသစ် ကိုတွေ့တာ မို့..။ Ribonucleic acid ဆိုတဲ့ RNA ကိုအသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ် တယ် ။
အကယ်၍ အဲဒီနည်းလမ်းအောင်မြင်ရင် ဒြပ်စင် အနည်းငယ် နဲ့ ကာကွယ်ဆေး အမြောက်အမြား ကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ တဲ့။
[ ref: Soumiya Suminatan / WHO မှအကြီးတန်း သိပ္ပံပညာရှင်]
ဒီလို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကာကွယ်ဆေးတွေကို အများပြည်သူ အကျိုး အတွက် အင်တိုက် အားတိုက် လုပ်နေကြ သလို ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေ ကလည်း ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားတာကို ကာကွယ်ခြင်း အားဖြင့် တစ်ဖက် တစ်လမ်း က ကူညီရမှာဖြစ်ပေမဲ့…. နိုင်ငံအသီးသီးက လူမျိုးပေါင်းများစွာက ခံယူချက်၊ အတွေးအခေါ် ၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဓလေ့ထုံးစံ မတူညီ ကြတာမို့ မလွယ်လှပါ..။
တူညီတဲ့ အချက်က ကမ္ဘာပေါ် မှာ အသက်ရှင် ချင်တဲ့သူ ပိုများ ပါတယ် ။ လူနည်းစုတစ်စုကြောင့် ကျန်သူတွေ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ အသက်၊ စည်းစိမ်၊ အိုးအိမ်တို့ မပျောက်စေချင်ပါ။
မေရွှမိုး (ကိုရီးယား )
အံ့ဩပွီး ကွောကျစရာ သိပျကောငျး တဲ့ တှရှေိ့မှုအသဈ အရ ကိုရို နာ ဗိုငျးရပျဈ သညျ HIV ပိုးဖွဈတညျ မှု နှငျ့ ဆငျတူလာဟုဆို
ကို ရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ နဲ့ H.I.V. ဗိုငျးရပျဈ ”
” ဒီက ပျရောဂါ ဟာ နိုငျငံအတျော မြားမြား မှာ အထှတျအထိပျ ကိုရောကျနပွေီ” WHO အရေးပျေါအခွအေနဆေိုငျရာ အကွီးအကဲ ဒေါကျတာမိုကျကယျရိုငျယနျကပွောတယျ။
ဒီနေ့ ( ဇှနျလ ၂၈ ရကျနေ့ ) အထိ ဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျ ခံရသူ စုစုပေါငျး အမရေိကနျမှာ ၂.၅ သနျး၊ ဘရာဇီးမှာ ၁.၂ သနျး၊ ရုရှားမှာ ၆ သိနျးကြျောနဲ့ အိန်ဒိယမှာ ၅ သိနျးကြျော..။ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ လညျး အခွအေနမေကောငျးလှ..။သောကွာနကေ့ လူနာအသဈ ၅၁ ယောကျ။ မနကေ့ ( ဇှနျလ ၂၇ ) တဈနတေ့ညျး ၆၂ ယောကျ။
နောကျဆုံး အစုလိုကျအပွုံလိုကျ ကူးစကျခံရ သူတှကေ စုဒိုဂှနျ ဘုရားရှိခိုးကြောငျး (수도권 교회 ) နဲ့ ဝနျဆောငျး ဘုရားရှိခိုးကြောငျး (왕성교회) ကဖွဈပါတယျ။တောငျကိုရီးယား မှာတော့ အခုလောလောဆယျ ကြောငျးတှပေဲ ပွနျပိတျရတော့မလိုလိုနဲ့ တဈယောကျမကနျြ မကျြနှာဖုံးတပျပွီး ဂရုစိုကျနကွေရတယျ။
တောငျကိုရီးယားထကျ အဆပေါငျး မြားစှာ ဆိုးတာက အမရေိကနျ..။ အမရေိကနျမှာ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျနှုနျးက ကွောကျစရာကောငျး လောကျအောငျ မွနျပွီး မြားနတေယျ။ မနကေ့ တဈနတေ့ညျး ၅ သောငျးနီးပါး ..။ အမရေိကနျမှာ ဒီတဈလ အတှငျး ဆန်ဒပွသူတှေ ၊ နိုငျငံရေးသမားတှေ၊ အဖကျြသမားတှကွေောငျ့ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျမှု သတငျးတှေ က သိပျမကောငျး လှပါ ။
အဓိကရုဏျးတှဖွေဈ ၊ရပျကှကျ တဈခုလုံး ကို ဖကျြဆီး၊ အကွမျးဖကျ ၊ရိုကျနှကျ၊ လမျးပျေါ က လမျးသှား လမျးလာတှေ ကိုတောငျ သတျဖွတျဖို့အထိ စိတျတိုဒေါသဖွဈနတေဲ့ သူတှတေောငျရှိနကွေ..။သူတို့ကို အမှီပွုပွီး ဗိုငျးရပျဈတှေ ပြျောပြျောပါးပါး စိတျတိုငျးကြ ဟိုဟိုဒီဒီ ခုနျကူးနကွေပွီ..။
အဓိက လူငယျတှကေ တားလို့မရ၊ အသကျ အရှယျကွီး သူတှေ သူတို့ကွောငျ့ ဗိုငျးရပျဈတှကေို အသကျပေးရငျဆိုငျနရေ။မငျးသားက quarantine ကာလကို ခြိုးဖောကျပွီး အိမျထဲမှာမနတေဲ့ ဘယျလျဂြီယံမငျးသား Joachim တောငျ စပိနျနိုငျငံ ယူရို ၁၀,၄၀၀ (ဒျေါလာ ၁၁၈၀၀) ဒဏျရိုကျ ခံခဲ့ရသေး။
မငျးသားက ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မလေမှာ COVID-19 ရောဂါ ရခဲ့တယျ။ဒီလို ရောဂါရတာတောငျ ဇှနျလမှာ ကာဒိုဘိုမွို့က စပိနျ ရညျးစား ရဲ့ မှေးနပေ့ါတီပှဲကို သှားခဲ့တာတဲ့ ။လူငယျတှေ စိတျကို ဦးစားပေး၊ ဆန်ဒပွ၊ ဒါမှ မဟုတျ အပြျောအပါးကွောငျ့ ဗိုငျးရပျဈရတာမြားတယျ။ကမ်ဘာတဝှမျးမှာ ရုတျတရကျ Covid-19 ကူးစကျခံရသူတှေ မြားလာတာ အသကျ ၄၀ အောကျ လူလတျပိုငျး နဲ့ လူငယျတှေ..။
အခု ရကျပိုငျးအတှငျး တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ရောဂါ ကူးစကျခံရသူ ၁၀ သနျးကြျောသှားခဲ့။ဟိုး အစပထမတုနျး က ပညာရှငျတှနေားလညျတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကတော့ အသကျရှူလမျးကွောငျးကိုပဲ ထိခိုကျနိုငျတယျတဲ့။နောကျပိုငျး သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ အဆုတျတငျမကဘဲ ကြောကျကပျ၊ နှလုံးနဲ့ သှေးလညျပတျမှုစနဈကိုပါ ဒုက်ခပေးနိုငျတယျလို့ သိခဲ့ကွရ..။ဒါကွောငျ့ အနံ့၊ အရသာတှပေါ ပြောကျကုနျတဲ့ အထိ။
သုတသေီတှေ နောကျထပျ တဈခု ထပျတှပွေ့နျပွီ ။ အဲဒါဟာ အံ့ဩပွီး ကွောကျစရာ သိပျကောငျးတယျ ။ COVID-19 နဲ့ ဆေးရုံတကျနရေ တဲ့ လူနာတှဆေီမှာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဆဲလျတှေ ပြောကျဆုံးသှားတယျ ဆိုတာ ကိုပဲ ။ကိုယျခံ စှမျးအား စနဈ ကို ကဆြငျးစတေဲ့ H.I.V. ဗိုငျးရပျဈ နဲ့ ဆငျတူနတေယျ တဲ့။
HIV ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ရောဂါ ဖွဈစဉျ အတိုငျးပါပဲ ။ ကလေးငယျတှေ ကို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈက သိပျပွီးဒုက်ခမပေးနိုငျဘူး။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ကလေးငယျတှမှော သိုငျးဂလငျး ( thymus )တှကေ အရမျးကောငျးတော့ T ဆဲလျ အသဈတှေ ကို အမွနျထုတျပေးနိုငျလို့။ အဲဒီ T ဆဲလျအသဈတှကေ ဗိုငျးရပျဈပိုးကိုမွနျမွနျ ဖကျြဆီးနိုငျတယျ။ သကျကွီးရှယျအိုတှကေတြော့ သိုငျးဂလငျး ( thymus ) တှကေ ကောငျးကောငျး အလုပျမလုပျတော့ ။ ဒါကွောငျ့ အသအေပြောကျမြားတာဖွဈ တယျတဲ့။
ကာကှယျဆေးထိုးဖို့ နိုငျငံတှေ အကွားပွိုငျဆိုငျမှု ကလညျး ပွငျးထနျလှ..။ Corona19 ကာကှယျဆေးတှလေညျး နောကျဆုံး အဆငျ့တှရေောကျနကွေတာ ၁၀ နိုငျငံရှိပွီ။
အဲဒီအထဲက ဗွိတိသြှဆေးဝါးကုမ်ပဏီ AstraZeneca ကထုတျလုပျတဲ့ ကာကှယျဆေးက အဆငျ့မွငျ့တယျ လို့ WHO ကခနျ့မှနျးတယျ။ Imperial ကောလိပျ (U.K) က သုတသေနအဖှဲ့ရဲ့ Corona19 ကာကှယျဆေးအသဈ ပေါ့..။ အဲဒီအဖှဲ့က အမြားနဲ့မတူတဲ့နညျးလမျး အသဈ ကိုတှတေ့ာ မို့..။ Ribonucleic acid ဆိုတဲ့ RNA ကိုအသုံးပွုတဲ့ နညျးလမျး တဈခုဖွဈ တယျ ။
အကယျ၍ အဲဒီနညျးလမျးအောငျမွငျရငျ ဒွပျစငျ အနညျးငယျ နဲ့ ကာကှယျဆေး အမွောကျအမွား ကို ထုတျလုပျနိုငျမှာ တဲ့။
[ ref: Soumiya Suminatan / WHO မှအကွီးတနျး သိပ်ပံပညာရှငျ]
ဒီလို သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ကာကှယျဆေးတှကေို အမြားပွညျသူ အကြိုး အတှကျ အငျတိုကျ အားတိုကျ လုပျနကွေ သလို ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသားတှေ ကလညျး ဗိုငျးရပျဈ ပွနျ့ပှားတာကို ကာကှယျခွငျး အားဖွငျ့ တဈဖကျ တဈလမျး က ကူညီရမှာဖွဈပမေဲ့…. နိုငျငံအသီးသီးက လူမြိုးပေါငျးမြားစှာက ခံယူခကျြ၊ အတှေးအချေါ ၊ နိုငျငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဓလထေုံ့းစံ မတူညီ ကွတာမို့ မလှယျလှပါ..။
တူညီတဲ့ အခကျြက ကမ်ဘာပျေါ မှာ အသကျရှငျ ခငျြတဲ့သူ ပိုမြား ပါတယျ ။ လူနညျးစုတဈစုကွောငျ့ ကနျြသူတှေ ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ၊ အသကျ၊ စညျးစိမျ၊ အိုးအိမျတို့ မပြောကျစခေငျြပါ။
မရှေမိုး (ကိုရီးယား )
ချင်းပြည်နယ် က မေ လးပြည်တော်ပြန် (၉) ဦးအနက် (၇) ဦး တွင် ကိုရိုနာဗိုင်း ရပ်စ်တွေ့ရှိထား
ပုံမှန်ထ က်(၃) ဆ ပိုကျနေ တဲ့ မီတာခ ကို တွက်ကြည့်တော့ မှ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်
ကျောင်း များပြန်ဖွင့်ရန် Covid 19ရော ဂါ ကာကွယ်ဆေးေ ပ်ါသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား